Global Voices teny Malagasy · 2 Janoary 2019
Tantara tamin'ny 02 Janoary 2019
Azia Atsinanana02 Janoary 2019
Azia Afovoany sy Kaokazy02 Janoary 2019
Rehefa nitolona nandritra ny taona maro, manana fitrandrahana famokarana ronono mandroso be i Shukria Attaye izay misy ny zokiny lahimatoa ho anisan'ireo mpikarama ao aminy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Janoary 2019
Nesorina ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Maraokana mpilalao baolina kitra, Henri Michel, taorian'ny voka-dalao ratsy nasehon'i Maraoka nandritra ny CAN: tsy rariny, hoy ireo bilaogera mampiasa ny teny Frantsay.
Maro mpanohana ny Hezbollah ao Bahrain, ary nisy valiny avy hatrany ireo vaovao nilaza ny fahafatesan'i Imad Mughniyeh, mpitarika ambony ao amin'ny Hezbollah.
Amerika Latina02 Janoary 2019
Ny herinandro tao amin'ny bilaogy Boliviana – feb 2006
Nanontany ny mpaneho hevitra iray ao amin'ny dikan-teny Espaniola vao haingana indrindra amin'ny famintinan'ny Global Voices ny bilaogy Boliviana hoe, “Tsy misy lohahevitra hafa ve? Na mitantara ny sehatra ara-tsosialy sy ara-toekarena fotsiny ve ny bilaogy Boliviana?”
Eoropa Afovoany & Atsinanana02 Janoary 2019
Nampiasaina tao Japan nandritra ny taona 2018 ny farangonteny Twitter #Heisei saigo (#平成最後, izay azo ambara ankapobeny hoe, "ny fotoana farany anaovanay izao amin'ny vanimpotoana Heisei") — indrindra fa tamin'ny vanimpotoanan'ny Taombaovao.